Jamal Mahamed – Hanoolaato Somalia National Party
Xisbiga wadaniyiinta Soomaaliyeed
Kamid noqo muwaadiniintaan kumidoobay 4ta D
Danteena Dadkeena Dalkeena Diinteena
Waxaa nahay dad xaquuqda binu aadamka udagaalama jecelna in aymar walba kor u qaadaan. Qof walba oo dalkeena ku nool wuxuu nagu leeyahay xaquuq diisa oo dhan oo binu aadannimo angaguna waxaan nagu waajib ah in aan si buuxda oo sharciga waafaqsan u difaacno xataa hadii aan qof kaas dhibsanayno ama aan jeclayn fikir kiisa iyo ficil kiisa inkasoo ayasan jirinba sabab uu qof qofkale udhibsado.
Waxaan rabnaa hadii aynu nahay Hanoolaato in aan dalkeena uhorseedno dhaqan wanaagsan. Mid shaqsi iyo mid dowliba. Sidaas daraadeed waxay hogaamiyeyaasheenu marwalba kudhaqmi doonaan sharciga meeshi ay arkaana in sharciga dalkeena lagu tumanayo waan difaaci doonaa. Waxaan ku difaacaynaa sida uu sharciga laftigiisa inoo baneeyay iyo diinta qaaliga ah.
Aklaaqda wanaagsan waa waxa kaliya oo inaga badbaadin kara isku dhac badan iyo is marin habaabin. Si aan shaqsiyadeena iyo shaqsiyada muwaadiniinta kale ee Soomaaliyeed ubadbaadino waa nagu waajib in aan is ixtiraamno. Waxay hanoooaato horseed unoqonaysaa kudarida sharciyadeena dalkeena iyo kuwa hanoolaato sharciyo ilaalinaaya sharafta qof walba.
Qofka ugu horeeya
oo aan lasocodsiino
Email ayaan kuusoo diraynaa kusaabsan kambeyn keena iyo xafladaha aan qaban doono hadii aad halkaan email noogu soo dirtid. Waxaa kale oo aad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyay ee hanoolaato iyo wixii fursado naga banaanaada.